Valencia oo biyo qabow ku shubtay war ay shaacisay kooxda Chelsea xilli ay diiday iney siiyaan xidigooda qadka dhexe | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Valencia oo biyo qabow ku shubtay war ay shaacisay kooxda Chelsea xilli ay diiday iney siiyaan xidigooda qadka dhexe
Valencia oo biyo qabow ku shubtay war ay shaacisay kooxda Chelsea xilli ay diiday iney siiyaan xidigooda qadka dhexe
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 15-06-16 10:08 AM Valencia ayaa lagu soo waramayaa inay iska soo diiday dalab 32 milyan oo ginni ah oo ay Chelsea kasoo gudbisay xiddigeeda qadka dhexe Andre Gomes.
Ka dib markii uu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay yimid kooxda ka ciyaarta horyaalka La Liga, Gomes ayaa ka mid noqday xiddigaha furaha u ah kooxda Los Che waxaana xiiso u qaba qaar ka mid ah kooxaha ugu xoogan Yurub ka dib bandhigisii wacnaa ee 12kii bil ee lasoo dhaafay.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay shabakadda Sky Sports News, Valencia ayaa haatan u sheegtay Chelsea in aysan ku iibin doonin xiddigeeda qiimo ka yar 42 milyan oo ginni ka dib markii ay iska soo diiday dalab 32 milyan oo ginni ah oo ay kooxda ka ciyaarta England Premier League kasoo gudbisay 22 sanno jirkaan.
Sida ay warbixintaani sheegeyso kooxdii hore ee uu Gomes usoo ciyaari jiray Benfica ayaa qaadan doonta boqolkiiba 25 qiimaha lagu iibiyo xiddigaan, Valencia ayaana dooneysa inay hesho 32 milyan oo ginno oo nadiif ah.
Habeenkii Talaadadii, Gomes ayaa kasoo muuqday kulankiii ay xulka Portugal barbardhaca 1-1 ah la galeen xulka Iceland ee tartanka Euro 2016.